ပန်ဒိုရာ: ပန်ဒိုရာရဲ့ မတ် ၂၇
Congratulation for your 2nd year anniversary!
ဒီပိုစ့်ကို အစောကြီးထတင်တာလား၊ မအိပ်သေး တာလား။ ဘလောဒ့်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်း ဆက်ပြီး ဘလောဒ့်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်...
တော်လှန်ရေးနေ့ နဲ့တိုက်ဆိုင်တာ အံ့သြမိပါတယ်..။ ထူးခြားသော နေ့ ၊ ဤ ၂ နှစ်ပြည့်မှသည် စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါသည်အထိ blogging လုပ်နိုင်ပါစေဗျာ..။
၁ နှစ်ပြည့် ကဗျာကိုလဲ ခံစားသွားပါသည်။
ညီမပန်ပန်ရဲ့ ကဗျာလေးတွေ စာလေးတွေ တခုတ်တရ လာဖတ်နေအုံးမှာပါ။
၂နှစ်ပြည့်တာ ၀မ်းသာတယ်။ နောင်နှစ်တွေလဲ လာအုံးမယ်။ (သင်္ကြန်သံကြပ်တွေလိုတောင် ဖြစ်သွားပြီ) :))
နှစ်နှစ်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ အမပန်ဝေမျှမယ့် စာတွေကို ဖတ်ရှုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
လွတ်လပ်စွာ ဆက်လက် ပျံသန်း ရှင်သန်နိုင်ပါစေ...
လောလောဆယ်ကတော့ မေးလ်ထဲကနေ လာခဲ့တာ ပန်ပန်ရေ ...
မေးလ်က ရောက်တာ အမြဲနောက်ကျလို့ တခါတခါဆိုရင် တိုက်ရိုက်ဝင်တယ်။ ကွတ်ကီးတွေ ဖျက်ထားမိလို့ တိုက်ရိုက်ဝင်မရရင် ပန်ဒိုရာလို့ ရိုက်ထည့်ပြီး ဂူဂဲလ်ကတဆင့်ဝင်တယ်။
တခါတခါတော့လည်း တခြားဘလော့ဖတ်ရင်း အသစ်တက်နေတာမြင်ရင် ၀င်လိုက်မိတာပဲ။ ဟဲဟဲ ... လမ်းကြောင်းတွေ စစ်တမ်းကောက်နေလို့ လာရာလမ်းကြောင်းတွေ ပြောပြတာပါ။
ပန်ပန့်ဘလော့လေးတောင် ၂-နှစ်ပြည့်သွားပြီနော်။ အချိန်တွေကုန်တာ မြန်လွန်းသလိုပဲ။
ရှင်သန်ခြင်းတွေ ဖြန့်ခင်းထားတဲ့ ပန်ဒိုရာရဲ့ ဘလော့လေးနဲ့တကွ ... ချစ်သော ပန်ဒိုရာ ... ဆက်လက်ပြီး ရှင်သန်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
မပန်.. ၂နှစ်မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ စာတွေအများကြီးရေးနိုင်ပါစေ..
မပန်လေးက ၂ နှစ်တောင်ပြည့်ပြီကိုး...း)
ချစ်လို့ စတာပါ မပန်ရေ..
အသက်နဲ ကိုယ် မြဲနေသရွေ့ .. လူတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေ အတွက် အားဆေး ဖြစ်တဲ့.. စာပေ အနုပညာတွေ ဖန်တီး သွား နိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးတယ်နော်...
ချစ်စရာ ၂ နှစ်သမီလေး ရဲ့ မွေးနေ့ ကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်
နှစ်နှစ်ပြည့်ကနေ သုံးနှစ်ပြည့် လေးနှစ်ပြည့်တွေ လုပ်နိုင်ပါစေ မပန်ရေ။ ပုံရိပ် စဖတ်ကတည်းကပဲ တကယ်ကို နှစ်နှစ်သက်သက် ဖတ်ဖြစ်တဲ့ မပန်ရဲ့စာတွေကို အမြဲ ဆက်ဖတ်ချင်ပါတယ်။
ဘာနေ့၊ ဘာလဲတော့ သိပ်မသိဘူးပေါ့နော်
ဗန်ဒိုရာ နှစ်နှစ်ပြည့်လို့ ဝမ်းသာတယ်
ဒီထက် စာတွေ၊ ကဗျာတွေ၊ ပန်းချီတွေ များများရေးနိုင်၊ ဆွဲနိုင်ပါစေလို့..း)
၂ နှစ်တောင်ပြည့်သွားပြီး အချိန်တွေကလည်းမြန်လိုက်တာ အားပေးခဲ့တာလည်း ၂နှစ်ပြည့်ပါတော့မယ်
အမ .. အမြဲပြောခဲ့သလို အမတယောက်ကောက်ရခဲ့ရတဲ့ ဒီနေရာလေးကို အမြဲအားပေးနေမှာပါ ။ တနေ့ စာရေးဆရာမကြီး ပန်ဒိုရာရဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်ဖို့ မျှော်လင့်ရင်း ...း)
နှစ်သားဆိုတော့ လူဆိုရင် စကားမပီကလာ ပီကလာ ပြောတတ်နေလောက်ရောပေ့ါ
လေးနဲ့ အဖော်ပြုခဲ့တာပဲ ကျေနပ်တယ်ဟုတ်..။
လူကိုလည်းခင်လို့လာတာ စာလည်းဖတ်ချင်လို့လာတာပါး)
အဲ- တို့နဲ့.. တလ ကွာ အမွာပူး ညီအမတွေပေါ့..ဒါဆို-
၂ နှစ် စာ ဘလော့ သက်ပြင်းလေး မချလိုက်မိဘူးလား။
တကယ်တော့..ဘလော့ဂင်းမှာ curve လေးတခု ရှိတယ်။
သေချာ ကြည့်ရင် အားလုံး အဲဒီ curve trend လေး အတိုင်းပါပဲ။
ဘာပဲပြောပြော- ၂ နှစ်စာ မျှဝေ ပျော်ရွှင်ခဲ့တာတွေက..အလကားမဟုတ်ခဲ့သလို.. ရှေ့ကိုလဲ.. စိတ်စေတနာ..ပျော်ရွှင် ကျေနပ်စရာ ခံစားချက်တွေနဲ့ အတူတူ ဆက်သွားကြအုံးမယ်လေ..း)
မပန်ရဲ့ ဘလော့ခ်က ၂ နှစ်တောင်ပြည့်သွားပြီနော်.. Blogspot ရှိနေသရွေ့“ရှင်သန်ခြင်းတွေ ဖြန့်ခင်းထားတဲ့ နေရာလေး” မှာ မပန် ပို့စ်အသစ် အသစ် တွေ အများကြီး ရေးဖြစ်ပါစေ.. :)
၂ နှစ်ပြည့်က စပြီး သားသမီး မြေးမြစ်များ ရသည့်တိုင် ဘလော့ခ်အရေး မပျက်ပဲ ရှိနိုင်ပါစေ။
၂ နှစ်ပြည့်မှသည်.... နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှင်သန်ခြင်းတွေ ဖြန့်ခင်းနိုင်ပါစေ....
I can't go online. I am using my friend's PC.
Anyway March isasignificent Month in Burmese history. Your blog is one ofakind in this blogosphere. It is significent enough for us. Wish this blog longlasting. From the 2nd anniversary to the centennial.
ဆက်ပြီး မျှဝေ Blogging နိုင်ပါစေ...
ဆက်လက် ဖတ်ပါ့မယ်.... မပန်ဒိုရာရေ....
ဘာလိုလိုနဲ့ (၂)နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့.... ကျွန်တော်တို့ စရေးတုန်းကတော့ ဘလောဂ်ကတော့ သိပ်မရှိဘူးနော်.... ဒီလူနဲ့ ဒီလူတွေပဲ
အစ်မဆီကိုလာပြီး အကြံပြု ဖျက်ရှုသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးနော် .. ဒါနဲ့ ပန်က မိန်းမကြီးလေးယောက်ထဲမှာ ဘယ်တယောက်လဲဟင်။
၂ နှစ်ပြည့် နေ့မှသည် နောင်နှစ်များမှာလည်း များများရေးသားနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် စောင့်မျှော်လျက်ပါ အစ်မ။
အမြဲတမ်း ရှင်သန်နေပါစေလို့ (ကျမ) ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။း-)
မပန် အမြဲ စောင့်ဖတ်ပါတယ်
မမပန်ဒိုရာတောင် ၂နှစ် ပြည့်ပြီကိုး ...
ညီမလေးလည်း ရှေ့ကမမကို ငေးရင်း ပေကပ်ပေကပ်နဲ့ လိုက်လာပါတယ် =)
မမကြီး လိုရာခရီးတိုင်းကို ရောက်ပါစေ..
ကျန်းမာချမ်းသာ စာများများ ရေးနိုင်ပါစေ..။
နောက်ထပ် နှစ် နှစ်ဆယ်မက စာတွေရေးနိုင်ပါစေ
အစ်မပန်ရေ အားပေးလျက်ပါ ကောင်းသောနေ့ဗျာ :)
ဒီဘလော့ဂ်လေး မွေးနေ့ ရောက်တိုင်း စိတ်ထဲမှာ ခံစားနေရတာထက် အတော်ငယ်တယ်လို့အမြဲထင်နေမိတယ်… ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ဖတ်ရတဲ့စာတွေက အရမ်းလူလားမြောက်နေလို့ ရယ် ရင်းနှီးမှုက ၂ နှစ်မက လို့ ရယ်ပါ… မဘလော့ဂ်ခင်ကတည်းက အားကျမိတဲ့ ဘလော့ဂ်လေးမို့သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ ကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးမိတယ်… စာဖတ်နေရရင်ကို ကျေနပ်နေပါပြီလေ… စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာ ဘလော့ဂ်ပါ ပန်ရေ… အမြဲအားပေးနေမှာပါ…
၂ နှစ်ပြည့် ဘလော့ဂါအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ခင်ဗျာ...။
ကျောက်စာ ၊မှင်စာ၊ ပေစာ၊ ပုရပိုက်စာ၊ ပုံနှိပ်စာ၊တိုနဲ့
စာပေတာဝန်၊ အမျိုးသားရေးတာဝန်၊ လူသားမျိုးနွယ်တာဝန်တို့ကို
ကျေပွန်ခဲ့သော စာဆိုတို့အတိုင်း ယခု ၂ နှစ်ပြည့် ဘလော့ဂါ
မပန်ဒိုရာ ၏ အင်တာနက်စာပေအပေါ် တာဝန်ယူမှု ကျေးဇူးပြုမှုတို့အတွက်
အတိုင်းအဆမဲ့ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်... ဆရာမပန်ဒိုရာ...
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ အနုပညာ စာပေမျိုးစုံကို စိတ်အေးချမ်းသာစွာ
ဆက်လက်ရေးဖွဲ့သွားနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်မေတ္တာ ပိုသရင်းနဲ့
27 Mar 09, 08:11
Dr Saw: Happy Birthday PANDORA...Long live on blog!!!
Pinkgold: ပန်ပန်ရေ comment ပေးလို့လည်း အရ၀ူး..2နှစ်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ creation များများ လုပ်နိုင်ပါစေ
Orange Chit Thu: ၂နှစ်မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ စာတွေအများကြီးရေးနိုင်ပါစေ.
28 Mar 09, 02:21
နှင်း: နှစ်နှစ်ပြည့် ဘလော့လေး နှစ်ပေါင်းများစွာ.... အောင်မြင်မှုပေါင်းများစွာ...အဓွန့်ရှည်ပါစေ။
ကျွန်တော်တို့ လေးစားရတဲ့ ဘလော့ဂ်တစ်ခုက ၂ နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ အားရကျေနပ်မိတယ်ဗျို့...။
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက်ရှင်သန် အကျိုးပြုနိုင်ပါစေဗျာ။
ဆက်လက်ပြီး... ပျော်ရွှင်စွာ ဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေ
ပထမဆုံး ကွန်မန့် ရှင် ပန်ဒိုရေ...
ကျနော့်ဘလော့ဂ်လေးကို ပထမဆုံး လာအားပေးခဲ့ တာကို မမေ့နိုင်ပါဘူး...
ပန်ဒိုရဲ့ ဘလော့ဂ် ၂နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်လေးကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်ဗျာ...
နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ ဖတ်လိုပါတယ်ခင်မျာ။ အိမ်ရှင်မပန်ပန် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဆက်လက်ဘလော့နိုင်ပါစေ။
မပန်က ကျွန်တော့်ထက် ၁လ လောက် စောရေးတာ။ ဘလော့မှာ သက်သက် ပြောပါတယ်။ ဖိုရမ်တွေမှာတော့ ကျွန်တော် မသွားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
ဘလော့မှာ ၂ နှစ်ဆိုတာ အတော် မနည်းမှန်း ကိုယ်တွေ့ပါပဲ။ မနည်းဘူးဆိုပေမည့်လည်း အခုထိ ဘလော့ရေးတာ ဖတ်တာဟာ ထမင်းစား ရေသောက်ကို မဖြစ်သေးဘူး။ ရည်းစားထားတာတောင် ၂ နှစ်အကြာမှာ အတော် စိတ်မလှုပ်ရှားတော့ပေမည့် ဘလော့မှာတော့ ၂ နှစ်ကြာလည်း အရင်ကလောက်တော့ အရှိန် မကောင်းတော့ ပေမယ့် ပိုးမသေသေးဘူး ဖြစ်နေတယ်။ မပန်ရော .. အဟီး။
တမိနစ်နောက်ကျသွားပြီ။ နှစ်နှစ်လဲ ပြည့်လို့သွားပြီ။ အဟဲ... နောက်ကျ ဘရာဗိုလေး လာပေးတာပါဗျာ။ ဘလော့ဖက် ဘလော့ဖက် မမလေးဒိုရာတယောက် အေပရယ်လ်ဖူးမှာ..ရူး...အဲ၊ နောက်ထပ်ပို့စ်ပေါင်းများစွာ ဆက်ဘလော့ဂ်နိုင်ပါစေ။
30 Mar 09, 22:27
YoungGun: မောင်ငယ်သေနတ်ကလေးမှ နောက်ကျှဆန္ဒပြုသွားကြောင်းပါ
30 Mar 09, 22:26
YoungGun: မပန်ဒိုရာ .. ညာလက်နဲ့ရေးရေး၊ ဘယ်လက်နဲ့ရေးရေး အသွေးသားမှာ အနုပညာတွေ စက္ကန့်မလပ် ဆက်လက်စီးဆင်းနိုင်ပါစေ
30 Mar 09, 22:24
YoungGun: မည်သို့ဆိုစေ ကျွန်တော်ကတော့ ပန်းလှေတစ်စီးထံမှ ကြဲချမည့် ဝတ်မှုံများကို ယုံကြည်ရဲရင့် မျှော်လင့်လျက် ..
30 Mar 09, 15:05
Wai Lwin Zaw: အစ်မရေ နှစ်နှစ်ပြည့်မှာပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
30 Mar 09, 15:04
ထက်ဇော်: စာလာဖတ်သွားပါတယ်.. ဆက်လက်လျောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ။
30 Mar 09, 14:15
ဒူကဘာ: ၂နှစ်မြောက်မှသည် ထင်သလောက် ဘလော့ဂ်ဂင်းနိုင်ပါစေ ...လိုအပ်ရင် လမ်းပြမြေပုံပါဆွဲ ပြီးချီတက်နိုင်ပါစေ။
အားပေး ဆုတောင်းသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ မောင်နှမတွေ အားလုံးကို အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှစ၍ ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ပါစေ မပန်ရေ